Siduu u dhacay dagaalkii xalay Muqdisho ku dhex maray ciidamada DF iyo kooxo hubeysnaa? - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Siduu u dhacay dagaalkii xalay Muqdisho ku dhex maray ciidamada DF iyo kooxo hubeysnaa?
Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahino cusub ayaa kasoo baxaya dagaal xalay magaalada Muqdisho ku dhex-maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo koox hubeysan oo loo malaynayo inay yihiin Shabaab.
Dagaalka ayaa ka dhacay Isgoyska Siinaay, waxaana uu billowday markii ciidamada dowladda ay rasaaseeyeen gaariga ay saarnaayeen kooxda hubeysan.
Ciidamada dowladda ayaa sida ay wararku sheegayaan billaabay rasaasta kadib markii gaarigan uu jiiray goobta ay ku hubiyaan baabuurta ee Isgoyska Siinaay, kadibna kooxda hubeysneyd ayaa rasaas ugu jawaabay, taasoo keentay in goobta oo mashquul ahayd lagu kala cararro.
Rasaasta la is-weydaarsaday ayaa waxay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah oo ku caweynayay maxaaqiyo ku yaalla halkaasi, ayada oo dhowr qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen.
Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada dowlada Soomaaliya ay gacanta ay ku dhigeen gaarigii ay wateen kooxdii hubeysneyd, balse lama xaqiijin karo. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa diiday inay ka hadlaan arrintan.
Maalmahan ayaa waxaa Muqdisho ka jiray cabsi ku saabsan in kooxda Al-Shabaab ay soo galeen magaalada, sida ay marar badan qortay Caasimada Online, waxaana dadka qaar yaab ku noqday in koox hubeysan oo aan ahayn ciidanka dowladda ay baabuur ku dhex-maraan magaalada.